बामदेव गौतमले पूर्वएमालेका नेताहरूसँग बदला लिने ! कस्तो छ तयारी ? — Sanchar Kendra
बामदेव गौतमले पूर्वएमालेका नेताहरूसँग बदला लिने ! कस्तो छ तयारी ?
दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउन भूमिका खेलेका नेता वामदेव गौतम अहिले मौन छन् ।
अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा हालिमुहाली गर्न थालेपछि गौतम खुसी छैनन् । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।